Ukhishwe inyumbazane uMnangagwa | Scrolla Izindaba
Ukhishwe inyumbazane uMnangagwa
UMengameli wase-Zimbabwe u-Emmerson Mnangagwa ngeke avunyelwe ukuya emcimbini wokugcotshwa kukaJoe Biden njengoMengameli waseMelika ngoLwesithathu.
UMengameli uMnangagwa bekungeyena yedwa umholi womhlaba ongazange athole isimemo kulo mcimbi. Angaduduzeka ngokuthi nababusi base-Iran, i-Vietnam ne-Belarus nabo ababizwanga. Umashiqela wase-North Korea uKim Jong Un naye akekho ohlwini lwezivakashi.
UMnangagwa kubikwa ukuthi uthathwa njengosongo olukhulu kwezokuphepha ngemuva kokuthi iqembu lakhe i-Varakashi cyber-terrorist libanjwe yi-CIA likhuthaza udlame olwalulandela ukubulawa kukaGeorge Floyd ngamaphoyisa.
Kepha akusona kuphela isizathu sokuba umashiqela avinjelwe kulo mcimbi.
IHhovisi le-Foreign Assets Control, inkampani yezobunhloli yaseMelika, nayo ithole ubufakazi bokuthi uyabandakanyeka enkohlakalweni enkulu, yokufaka izigidigidi zezimali zikahulumeni kwi-akhawunti yangasese yebhange elingaziwa.
Akukhona okokuqala ukuthi uMnangagwa akhishwe ohlwini uma kugcotshwa uMengameli waseMelika
Waqala ukungafakwa ohlwini ngowezi-2001, ngenkathi kuvela ubufakazi bokuthi wayexhumanisa udlame olwaluhambisana nokuhlaselwa kwamapulazi abamhlophe base-Zimbabwe nodlame okhethweni.